Kitra any Eoropa – «Ligue des champions» : afa-bela tamin’ny Bayern de Munich ny PSG | NewsMada
Kitra any Eoropa – «Ligue des champions» : afa-bela tamin’ny Bayern de Munich ny PSG
Ela ny ela, afa-bela tamin’ny ekipan’ny Bayern de Munich ihany ny Paris St Germain. Resiny tamin’ny isa mazava, 3 no ho 0, teo amin’ny lalao mandroso amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, ity ekipan-dRainiboto ity. Fihaonana natao tao amin’ny kianja Parc des Princes ny alarobia lasa teo.
Azo lazaina fa nahay nanararaotra ny tsy fahampian’ny mpilalao teo amin-dry zareo Bayern de Munich ny Parizianina. Anisan’ny lesoka be, teo amin’ny Alemà mantsy ny tsy fijoroan’ireo mpilalao tompon-toerana, toa an’i Neuer, mpiandry tsatoby, sy i Boateng, teo amin’ny fiarovantena. Toy izany koa i Franck Ribery, tsy tao anatin’ireo 18 voasoratra tao anaty taratasin-dalao. Efa tany amin’ny faramparan’ny fotoana ihany vao nampidirin’ny mpanazatra i Roben.
Na izany aza, vao 2 mn nanombohana monja dia efa nanakobana ny harato, i Dani Alves. Mbola nampian’i Cavani indray izany teo amin’ny minitra faha-31 ary ny an’i Neymar, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa, teo amin’ny faha-63 mn, nilalaovana.
Ankoatra io vokatra io, tamin’io isa 3 no ho 0 io ihany koa ny nanilihan’ny Celtic ny Anderlecht. Nomontsanin’ny Manchester United, tamin’ny isa mavesatra, 4 no ho 1, kosa ny CSKA Moscou. Resin’ny Juventus, 2 no ho 0 ny Olympiakos ary tamin’ny isa 5 no ho 0 ny nandresen’ny Basel ny Benfica. Ny AS Roma, nanilika ny FK Qarabag, 2 no ho 1. Ny 17 oktobra, indray ny tohin’ny fifanintsanana, eo amin’ity “ligue des champions d’Europe”, ity.